I-pulley enesitamente eqinile ngokuthwala China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Textile Ceramics > I-General Textile Ceramics > I-pulley enesitamente eqinile ngokuthwala
I-Model No.: JH.TC.013
Izinto ezenziwe nge-ceramic ezithuthukisiwe zisebenzise isikhathi eside ekuhlungeni kwemishini ye-textile ngenxa yokumelana nokugqoka okungaphezulu kokuphezulu, ukuqubuzana okuphansi, ukumelana nokushisa okuphezulu, izinhlamvu zamakhemikhali.
Njengamanje, sisebenzise izinhlobo ezahlukene ze-aluminium oxide ceramics ukwakha ubuhlungu be- pulley s olid ceramic, ukuze sikwazi ukuhlangabezana nezidingo zabathengi, siyakwazi ukuqhubeka ne-pulan ye-ceramic ngokuthwala. Unomsebenzi wesikhathi eside wesevisi kune-pulley yensimbi.
Sinikeze ezinye izinto eziningi ze-textile ze-ceramic, njenge-guide ceramic eyelet, umhlahlandlela we-ceramic roller, umhlahlandlela we-ceramic, umhlahlandlela we-ceramic pigtail, ubhondi we-ceramic, induku ye-ceramic, ipuleti ye-ceramic njalonjalo. Asigcini nje kuphela ukuhlinzeka okungaphezulu kwamakhulu wezinto ezijwayelekile, kodwa futhi sibhekene nokuhlukunyezwa kwesikhombisi senkambiso yoceramic yenkambiso njengemidwebo yamakhasimende ngamunye.